Ihe kpatara China na -emetụta ịdị mgbagwoju anya nke ụlọ ọrụ na ndị na -eweta ya BASILE
Nanị nha anaghị ekpebi oke akụkụ ahụ, mana ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara ya. Buru n'uche, mgbe ụfọdụ akụkụ akụkụ nnukwu atụmatụ na -adị obere ike karịa obere akụkụ dị mgbagwoju anya. Ọzọkwa, tulee nha nke atụmatụ onye ọ bụla, n'ihi na nke a na -emetụta oke ngwa ịcha nke a ga -eji. Ngwaọrụ buru ibu, nke na-agba oke ọsọ nwere ike wepu ihe ngwa ngwa, na-ebelata oge igwe.
Onu ogugu arụmọrụ, mmechi yana ndenye ego dị mkpa ga -emetụtakwa akụkụ akụkụ ya. Dabere na jiometrị, mmecha na ntachi obi wdg, usoro ọrụ nwere ike ịdị mgbagwoju anya, na-ewe oge na nkọwa. Dịka ọmụmaatụ, akụkụ dị mgbagwoju anya nwere ike ịchọ ọnụọgụ nrụgharị na ntinye aka. Mgbe ụfọdụ, igwe axis 5 ma ọ bụ igwe ntụgharị igwe nwere ike ịbụ igwe kacha dabara adaba, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọ dị ọnụ ahịa imepụta ma ọ bụ chọọ ọnụ ahịa dị obere.
Ntachi obi nkebi
Nnwere onwe akụkụ nwere ike imetụta nhọrọ igwe CNC ejiri mee ihe yana nwekwara ike imetụta ọnụ ahịa na oge iduzi. Ihe ngwongwo, ọsọ igwe na ngwa ọrụ na -emetụtakwa nnabata a na -enweta. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ka ntachi obi na -esiwanye ike, otú ahụ ka akụkụ nke gị ga na -erikwu nri. Nnwere onwe dị elu na -enye ohere maka nkenke karịa, mana ọ nwekwara ike ịgụnye usoro, arụmọrụ, yana ngwaọrụ na igwe, si otu a na -agbakwunye ọnụ ahịa ya.
Mgbawa bead na -agụnye mwepụ nke nkwụnye ego ọ bụla ma ọ bụ ezughị oke n'akụkụ maka ịdị n'otu karịa, dị larịị. Ọdịdị okirikiri gbara okirikiri na-ahụ na ọ ga-agwụcha nke ọma, a na-ejikarị ya eme ihe na-enye matte. A pụkwara iji chaplet ndị mara mma mee ihe maka satin dị ka nke na-adịghị mma.
Emechara anodized na-enye mkpuchi mkpuchi na-eyi mkpuchi, nke na-adịkarị n'ọtụtụ agba. Anodizing na -apụtakarị nke ọma, na oyi akwa na -adịkarị gịrịgịrị wee jide n'aka na ị ga -atụle akara CNC n'elu.
Dị ka machined
Mmecha ọzọ ga -ahapụ ịdị nhịahụ elu ka a na -arụzi ibe ahụ. A na -ekpebi ịdị nkọ nke ọrụ site na iji uru Ra. Karịsịa ịdị elu dị elu maka akụkụ akụkụ CNC bụ Ra 1.6-3.2µm.
Akụkọ Nchọpụta CMM
Kedu ihe bụ mkpesa CMM na gịnị kpatara m ji chọọ otu?
Nnyocha igwe na -ahazi igwe (CMM) gụnyere ịgụnye igwe ịhazi ihe iji lelee akụkụ nke akụkụ iji chọpụta ma akụkụ ọ na -emezu ihe chọrọ nnabata. A na -eji igwe nhazi ihe iji tụọ ogo na njirimara ihe.
A ga -achọ nyocha CMM iji tụọ akụkụ ndị dị mgbagwoju anya iji hụ na ha dabara na nkọwapụta. A ga-etinyekarị ha maka akụkụ dị oke elu nke achọrọ ezigbo mma na izi ezi. N'oge a, a ga -enyochakwa ebe dị larịị dị larịị iji hụ na ha ziri ezi na eserese na imewe ya.
A CMM na -arụ ọrụ site na iji nyocha na -atụle isi ihe na -arụ ọrụ. Oghere 3 na -etolite sistemụ nhazi igwe. Usoro nke ọzọ bụ sistemụ nhazi akụkụ, ebe axes 3 na -emetụta/kwekọrọ na njirimara na datum nke ihe ọrụ.
Uru nke Nnyocha CMM
A ga -eme nyocha CMM dị ka na mgbe achọrọ, na mgbe ụfọdụ ọ ga -abụ iwu. Akụkọ nyocha nke CMM nwere ike ịchekwa oge ma belata ọnụ ahịa dị elu site n'ịhụ na emepụtara akụkụ ahụ nke ọma. Nke a na -ahụ na ọ nweghị ihe fọdụrụ na ohere, a na -ahụkwa ihe ọ bụla site na imewe ma ọ bụ mmejọ tupu mbupu.
Dabere na ụlọ ọrụ ahụ, ndapụ na nkọwapụta nwere ike bụrụ oke mbibi (Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ahụike, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ikuku.) Nlele njikwa njikwa ikpeazụ a nwere ike ịnye mmesi obi ike tupu ebinye aka ma nyefee onye ahịa ya.
Mgbagwoju anya nke otu akụkụ
Mgbagwoju anya nke akụkụ
Osote: Igwe anaghị agba nchara na CNC machining
Aluminum Aluminom CNC machining Parts
F316L CNC nkenke igwe ihe
Akara akpaghị aka, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Akụkụ Ngwa CNC, Igbe galvanized,